सहरी विकास र कानून मन्त्रीद्वारा निर्माणाधीन संसद भवनको अनुगमन - Shiva Maya Tumbahangphe
सहरी विकास र कानून मन्त्रीद्वारा निर्माणाधीन संसद भवनको अनुगमन
काठमाडौं– सहरी विकास एवं भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले निर्माणाधीन संसद भवनको अनुगमन गर्नुभएको छ ।
सिंहदरवारस्थित पुतली बगैंचामा निर्माणाधीन संसद भवनको प्रगतिबारे बुझ्न बुधबार साँझ दुई मन्त्री अनुगमनमा जानुभएको हो । मन्त्रीहरुसहित अनुगममा संघीय संसद सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतम पनि रहनुभएको थियो ।
भवन निर्माणको काम गरिरहेको टुण्डी सेक ज्वाइन्ट भेन्चर निर्माण कम्पनीले लकडाउनका कारण गत आर्थिक वर्षमा सोचेजति काम हुन नसकेको जानकारी गराएको थियो । १५ प्रतिशत काम गर्ने लक्ष्य लिए पनि महामारीका कारण ८ प्रतिशतमात्रै गर्न सकिएको निर्माण पक्षले मन्त्रीहरुले जानकारी गराएको छ ।
तीन वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको संसद भवन तोकिएको समयमा नै पूरा गरिने निर्माण पक्षले जानकारी दिएको छ ।
२०७६ साल असोज १ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सिंहदरबारभित्र रहेको पुतली बगैंचामा संघीय संसद् भवनको शिलान्यास गर्नुभएको थियो ।
महामारीमा शिक्षकको दायित्व झन् बढीः कानून मन्त्री